Organic mukutarisa - "Potato System" magazini
kuru Maitiro / mafambiro
в nhau, Maitiro / mafambiro
Chinyorwa: Veronica Perova
Nyanzvi dzinofungidzira kukura kweRussia organic musika wemiriwo
Musika weiyo organic miriwo muRussia uri mukutanga kwayo: kune gumi nevaviri chete vanopupurirwa vagadziri vezvigadzirwa izvi munyika, mizhinji yemuriwo miriwo ichiri kuunzwa kunze. Nekudaro, mukana wedivi iri wakakura - kudiwa kwemiriwo mitsva uye ine hutano miriwo iri kukura, uye kunyangwe panguva yedenda, vatengesi havana kuona kudonha mukutengesa kwechikamu ichi chezvigadzirwa zvekudya. Nyanzvi nevatori vechikamu vemusika vane chivimbo chekuti kukura kwemuriwo wekurima muriwo kuri padyo nekona.
MunaNdira 2020, Federal Mutemo weOrganic Production N 280-FZ yakatanga kushanda muRussia, iyo yakatanga matanho akati wandei kamwechete: kugadzirwa kwechitupa sisitimu zvinoenderana nematanho emunyika, epakati nepasi rose, kuoneka kwechiratidzo chakajeka uye rejista yakabatana yevanogadzira organic pane webhusaiti ye Ministry of Agriculture yeRussia Federation.
Gwaro rinosimbisa tsananguro yezvigadzirwa zvehunhu uye rinogadzirisa maitiro ekugadzirwa kwaro, kuchengetedza, kutakura, kunyora uye kutengesa. Sekureva kwenyanzvi, kubuda kwemutemo kuchabatsira mukusimudzirwa kwekugadzirwa kwehupenyu muRussia zvakawandisa uye miriwo iri kunyanya kukura, pamwe nekuwedzera kukwezva kwechikamu ichi kuvarimi.
Musika mudiki une mukana mukuru
Parizvino, huwandu hwemusika weRussia wezvigadzirwa zve organic ishoma, mazhinji acho (anenge 80%) anotengwa kubva kunze kwenyika.
Sekureva kweNational Organic Union (NOS), panguva ino muRussia, kubva pamazana matatu kusvika mazana matatu emazana mahekita epasi anozivikanwa kugadzirwa kwe organic. Dzimwe dzadzo inzvimbo dzekutendeuka uye nyika dzakasimbiswa dzezvirongwa zvenguva yemberi. Mukutsvagisa, kune chete mazana maviri nemazana maviri nemakumi maviri emahekita epasi akakodzera kurima. Panguva imwecheteyo, sekureva kwenyanzvi, pane mahekita emamiriyoni makumi matatu nemana evhu rinorimwa risina kurimwa munyika, iro rakakodzera kurima kwekurima.
Asingasviki 1% emabhizimusi ekurima ari kuita kugadzirwa kwezvinhu zvakagadzirwa muRussia, uye kusvika nguva pfupi yadarika huwandu hwavo hahuna kuwedzera. Nekudaro, izvozvi mamiriro atanga kushanduka kuita zvirinani, kusanganisira mubato rekugadzira michero nemiriwo.
Sekureva kwemutungamiriri mukuru weNational Organic Union, Oleg Mironenko, kunze kwevane makumi masere nevaviri veRussia vanogadzira makemikari, mabhizimusi gumi nemaviri chete ndiwo ane hunyanzvi hwekurima miriwo, kunyanya kusango.
"Organic kurimwa kwemuriwo haisi nzira iri nyore, asi ine zvakawanda zvinogoneka," anodaro Ksenia Firsova, nyanzvi inotungamira ye organic organic chitunha "Organic Expert", muongorori-odhita wezvekunze organic organic EU / NOP mu
Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH (Germany). Sekureva kwenyanzvi, zvitsva zvigadzirwa zve organic zvinonakidza kune vatengi veRussia, asi kugadzirwa kwayo - kurima mhando yepamusoro miriwo, kudzivirira zvirimwa kubva kuzvipukanana nezvirwere nenzira dzinobvumidzwa mukugadzirwa kwe organic, kuchengetedza zvirimwa mumamiriro akakodzera, zvigadzirwa - zvinoda kuti varimi vatore zviito zvinofungisisa, zvechokwadi uye nenguva.
"Mapurazi mazhinji anorima miriwo ari muStavropol neKrasnodar Territories uye Voronezh Dunhu, kwaunogona kurima miriwo pasina hanya nemamiriro ezvinhu," anodaro Oleg Mironenko. - Uye zvakare, matanho ari kutorwa mumatunhu aya ku
kupa rutsigiro kune chikamu chezvekurima kubva kuvakuru vemunharaunda ". Semuenzaniso, iyo Voronezh Dunhu rinopa rutsigiro maitiro ne100% uye kutenga kwe biofertilizers ne50%. Zvakare, iyo nyaya yekuunza yekuwedzera
zvematongerwo enyika uye pahekita kutsigira kwevanogadzira organic. Panguva imwecheteyo, hakuchina hukuru-hukuru nyika inotsigira ye organic chikamu padanho remubatanidzwa muRussia, maneja mukuru weNational Organic Union anodemba.
Ksenia Firsova anotsigira kuti mukana wekuwana rubatsiro unobva padunhu iri, uye anokurudzira kuti varimi vajekese maitiro ekubhadharisa mitengo yechitupa chevhisi kuhushumiri hwedunhu kana dhipatimendi rezvekurima. "Mari yekuburitsa chitupa inoverengwa mumazuva ekuongorora ega ega pachigadzirwa chimwe nechimwe," nyanzvi inoyeuka.
"Mapurazi ari kumatunhu ekumaodzanyemba, sekutonga, ane hunyanzvi mumavise, magaka, matomatisi, uye pizi," Oleg Mironenko anoenderera mberi achitaura nezvevatori vechikamu vemusika. - Uye makambani muMoscow, Leningrad neKaluga matunhu anonyanya kurima mbatatisi, makarotsi, beet, kabichi - iyo inonzi borscht set. Asi chirimwa chikuru kwavari achiri mbatatisi. " Pakati pemakambani anorima organic miriwo, iyo nyanzvi inodoma "Biofarm yeKuban" iri kumaodzanyemba kweKrasnodar Territory, "Organic Around" muStavropol Territory, "Bolotovo", "Vasilki", "Ryabinka" mudunhu reMoscow uye vamwe.
Sachigaro weBhodi reMubatanidzwa weOrganic Kurima, nhengo yedare reruzhinji rebazi rezvekurima reRussia Federation, Mumiriri wePedagogical Sayenzi Sergei Korshunov anoti musika weRussia wemiriwo miriwo muvhu rakavhurika wave kungoumbwa, anongova mazana emahekita ehupenyu hwevhu. "Panguva imwecheteyo, kune varipo mumusika vanga vachirima organic miriwo kwemakore mazhinji," anodaro Sergey Korshunov. - Semuenzaniso, Biofarm yeKuban yanga ichishanda muKrasnodar Territory kubvira 2012. Chokwadi, ikozvino purazi rakanangana nemiriwo yegreenhouse uye rinorima madomasi, magaka, sipinashi mumafirimu ekuchengetera, pamwe nemavise nemapfumo ".
Mumwe mutambi pamusika, nhengo yeUnion of Organic Kurima, ikambani yeOrganic Around, iyo inogadzira zviyo, zvirimwa zvemaindasitiri, pamwe neminda yekuvhura minda uye inozvigadzira muStavropol Territory. Sergey Korshunov anosimbisa kuti muna 2019
kambani iyi yagamuchira yepasi rose organic chitupa.
"Takasimbiswa zvichiteerana nemitemo yeEU 837/2007, 889/2008," anotsinhira mukuru wepurazi reOrganic Around, Ph.D. n. Amiran Zanilov. "Tichaenda kunowana chitupa cheRussia gore rino." Akataura kuti kubvira gore rapfuura iyo assortment yakagadziriswa. Nekudaro, kambani yakasiya kugadzirwa kwezvinhu zvakasikwa, izvo zvaifanira kutengeswa zvisina kugadziriswa, ndiko kuti, kubva kumavise (mavise nemavise). Mu "Organic Around" vanobvuma kutangiswa kwebasa nezvirimwa izvi, asi chete kana zvabuda pachena kuti chii chinogona kugadzirwa kubva kwavari uye nemidziyo ipi, uyezve kune mari yekutenga kwayo.
"Panguva imwecheteyo, takawedzera nzvimbo iyi pasi pemadomasi, manhanga tikatanga kurima magaka," akadaro Amiran Zanilov. "Tiri kurongawo kutanga kuburitsa organic gariki nezvinonhuwira."
Organic yekunze miriwo chinhu chemwaka chiri kudiwa zvakanyanya pakati pevagari, anodaro Sergei Korshunov. "Ivo vanofananidza zvakanaka mune yavo manakiro maitiro. Vanhu varasikirwa nemadomasi akasvinwa madomasi uye vari kuda kubhadhara mutengo wakakwirira kwavari,
senge mimwewo miriwo, ”anodaro.
Sekureva kwaKorshunov, vagadziri vanowanzovavarira kupinda mumusika weMoscow, St.Petersburg, nenzvimbo hombe dzemaguta. Ivo vanoverengera kusvika makumi mapfumbamwe kubva muzana ezvisikwa zvekutengesa. "Asi vanhu vanofanirwa kudya zvigadzirwa zvine hutano uye zvakasikwa, kunyanya zvitsva uye zvemwaka, mumatunhu ese eRussia. Kwandakazvigadzira, ndakaitengesa ipapo, iyi ndiyo imwe yemisimboti mikuru yezvinhu zvakasikwa. Zvakakosha kuti cheni yekutengesa ipfupi sezvinobvira, uye kuti zvigadzirwa zviri zvitsva uye zvakasikwa, ”Sergei Korshunov ane chokwadi.
Panguva imwecheteyo, Amiran Zanilov anotarisa kune chokwadi chekuti mugove wezvekugadzirisa zvinhu unowedzera gore rega rega, izvo zvine chekuita nekuwedzera kwemutengo wemafuta, migwagwa inobhadharisa, nezvimwewo. Pamusoro pezvo, chirevo chete kumusika mukuru nguva yakareba inosanganisira njodzi yekuchinjisa chiyero chekudiwa uye
inopa mune imwe nharaunda. “Naizvozvo, zano rekambani yedu nderekupinda mumisika yematunhu. Neraki, mutemo wemitengo unobvumidza, - anotsanangura. "Nhasi, 85% yezvigadzirwa zvedu zvinotengeswa mumatunhu." Saka, nekuda kwerubatsiro rweChamber of Commerce nemaindasitiri eRepublic yeNorth Ossetia-Alania, zvigadzirwa zve "Organic Around" zvinotengeswa muzvitoro gumi nemaviri muNorth Ossetia.
Organic Farming Union zvakare inotsigira danho rekuvandudza matunhu reOrganic Around.
"Isu tinoona kuti kupinda kwezvisikwa mumisika yematunhu chiitiko chitsva," anosimbisa Sergey Korshunov. Maitiro akafanana, sekureva kwake, ari kuvandudzwa nenhengo dzeUnited of Organic Kurima muSiberia. Semuenzaniso, IE Volkov makore mashoma apfuura akavhura chirongwa cheKalina-Malina chekutengesa zvigadzirwa zvepurazi. Anokoka musimboti kubatana chete maSiberia uye varimi chete, kwete zvekurima. Iyo purojekiti iri kubudirira kubudirira mu2020 zvakare. Sekureva kwenyanzvi, vanotengesa vaKalina-Malina, kusanganisira vanogadzira miriwo, nerubatsiro rweMubatanidzwa gore rino
vari kuzonyorera kune organic chitupa.
Nekudaro, director weNOS, Oleg Mironenko anowedzera nhunzi muchizoro muhurukuro, achirangarira maitiro akasuwa gore rino akabatana nedenda rekonavirus. “Nekuda kwekurambidzwa kwekutengeswa kwemiriwo kunze kwenzvimbo dzavakagadzirwa, pamwe nekukura kwemitengo yezvigadzirwa nekuda kwekuwanda kwemadhora (mbeu, zvigadzirwa zvebhaisikopo, zvikamu, nezvimwewo kazhinji zvinofanirwa kutengwa mari yekunze), mamwe mapurazi ehupenyu aisakwanisa kutengesa chirimwa chakarimwa, - anoyeuka. "Ini ndaifanira kusangana nesarudzo: yekuparadza miriwo inoitirwa kutengeswa mune mamwe matunhu, kana kuitengesa mumisika yemuno iri pasi pemutengo".
Achienderera mberi nehurukuro nezve mafambiro, Sergey Korshunov akacherechedzawo kuti kutarisisa kwakanyanya kuri kubhadharwa kukudziridzwa kwenzvimbo yekudzidzira, kuchinjiswa kwezivo mumunda wekurima kwekurima. Nekudaro, iyo Union yeOrganic Kurima, mukati mehurongwa hwekuzadzikiswa kwemubhadharo wepurezidhendi, yakabata dzidziso yemahara mukugadzirwa kwemanyowa matomatisi munzvimbo yakashama mukambani ye "Organic Around" muna Nyamavhuvhu 2020 Sekureva kwenyanzvi, purazi iri rave muzinda wesainzi uye unoshanda, uko hupfumi hunogoneka matekinoroji ekugadzirwa kwemiriwo miriwo ari kuitwa padanho rakakomba mukuita. Akacherechedzawo kuti mukuru wepurazi, Ph.D. n. Amiran Zanilov munhu anozivikanwa mune organic Organisation uye munyori wezvesainzi uye nzira nzira kurudziro ye Ministry of Agriculture yeRussia Federation nezve organic kurima, rakaburitswa muna 2018.
Pakati pezviitiko zvakakosha zvevanhu venharaunda, Oleg Mironenko akatumidzawo kutanga kwechirongwa chekugadzirwa kwembeu yemiriwo yemiriwo inokura pachishandiswa purazi re "Bioferma Kuban", mune iro rakakura kambani mbeu "Poisk". “Chirongwa ichi chakatanga mugore ra2020
gore. Uku ndiko kumedza kwedu kwekutanga mumunda wekugadzira mbeu dzepamusha dzekurima muriwo ”, - akadaro Executive director weNOS nekudada.
Kukosha Kuwedzera Chigadzirwa
Sekutaura kwaOleg Mironenko, muRussia, iwo marginality yemuriwo wekurima miriwo wakakwira zvakapetwa zvakapetwa kupfuura muchikamu chetsika. "Uye, nekuda kwekuvandudzwa kwetekinoroji munzvimbo ino, mutengo wekugadzirwa kwemiriwo miriwo hauna kunyanya kukwirira pane wekurima wekare," anowedzera.
Semuenzaniso, maneja mukuru weNational Organic Union anodudza zvakaitika kuna Krasnodar. Pane zviripo nhasi
Kugadzirwa kwemuriwo miriwo ndeye 30-40% chete yakakwira pane yekurima echinyakare zvigadzirwa. Uye kuzvitengesa, seizvo nyanzvi inovimbisa, zvinogona kudhura zvakanyanya: kune chinodikanwa chemiriwo miriwo, uye mitengo yakamisikidzwa yakakwira kupfuura yemiriwo akajairwa.
Zvakare, sekureva kwake, chiitiko chekambani "Bioferma Kuban" chinonakidza. "Zvakazoitika kuti mutengo wekurima matomatisi emakemikari mumafirimu ekuchengetera mafirimu unogona kuenzana nemari yekurima mhando dzechirimwa ichi uchishandisa michina yeindasitiri," akadaro.
Oleg Mironenko. "Zvimwe chiyero ichi chinogona kuchengetedzwa kunyangwe kurima matomatisi kusango."
Amiran Zanilov anosimbisa kuti kugadzirwa kwezvinhu zvakasikwa, kutanga kwezvose, kunofanirwa kutariswa sebhizinesi rinotarisana nemagariro, chinangwa chikuru chiri kuita purofiti. "Kune varimi vanokwanisa kuwana chigadzirwa chine huwandu hwakawedzerwa nekuda kwezvakatipoteredza, kurima miriwo inogadzira inozobatsira mune zveupfumi," ane chokwadi.
Nekudaro, Sergei Korshunov anotarisa kune chokwadi chekuti marginality yekugadzirwa kwemuriwo miriwo inoenderana nematanho ekutengesa. Zvakajairika, sekureva kwake, inoonekwa semubatsiro we30%.
Parizvino, zvakanyanya kutengeswa zvigadzirwa zve organic zvinoratidzwa pamashefu egirini ezvitoro zveprimiyamu (semuenzaniso, Azbuka Vkusa), anoyeuka Amiran Zanilov. “Kana kambani yedu ichigona kutengesa mimwe miriwo yakafanana neyezvatinogadzira
(neEvrolistk) pamutengo ka5-6 zvakapetwa pane zvakatengwa kunze, mari yacho inogona kusvika 80-100%, "anodaro mukuru weOrganic Around.
Sekureva kwaOleg Mironenko, izvozvi zvitoro zvakawanda pane shefu ine zvigadzirwa zvinogadzirwa zvinonyunyuta nezvekushomeka kwemiriwo nemichero uye vakagadzirira kuzvitenga kubva kuvanogadzira vekurima vekumba. Akataura izvozvo pamberi pekoronavirus denda, mutengi
kudiwa kwemuriwo wekurima kwaikura zvakatsiga, uye kunyangwe panguva yekuzvisarudzira, ngetani dzekutengesa hadzina kutaurira kudonha kwakapinza mukutengesa kwechikamu ichi chechigadzirwa, kunyangwe kudzikira kwemari yemhuri. "Dambudziko nderekuti hapana miriwo pachayo," akasimbisa Oleg Mironenko uye akachema-chema kuti kuwedzerwa kwenzvimbo dzekugadzirwa kwemiriwo miriwo hakuitike nekukurumidza sekuda kwedu.
Panguva imwecheteyo, nyanzvi nevatambi vemusika vanotarisira kuti mumakore anotevera huwandu hwemapurazi emiriwo akasimbiswa muRussia achakura nekukurumidza.
Ini ndinowana sei chitupa?
Ksenia Firsova, nyanzvi inotungamira yekambani yeOrganic Expert, akataura zvakadzama nezve maitiro echitupa uye zvinodiwa kumapurazi. "Sekureva kweMutemo weFederal" Pane Organic Zvigadzirwa ", mabhizinesi akapasa maitiro ekupa chitupa mukugadzirwa kwavo ane mvumo yekushandisa imwe" organic "mucherechedzo uye izwi rekuti" organic "pane zvavakaisa," anodaro nyanzvi. - Certification inoitwa zvinoenderana neyakajairwa GOST 33980-2016 "Organic zvigadzirwa. Mitemo yekugadzira, kugadzirisa, kunyora uye kutengesa "mune rakazivikanwa chitupa chemuviri".
Ksenia Firsova akatsanangura kuti muyero unoisa zvimwe zvinodiwa mumapurazi ezvirimwa: kuchengetedza kubereka kwevhu (semuenzaniso, kuvapo kwekutenderera kwezvirimwa), kushandiswa kwefetiraiza uye zvigadzirwa zvekuchengetedza miti (zvinongobvumidzwa zvinhu zvinogona kushandiswa). Pane zvakakosha kune mbeu uye zvekudyara. Uye zvakare, mukukura kwezvirimwa, zviumbwa zvinorambidzwa kukura mune hydroponics. "Mamiriro ekuunganidzwa, kurongedzwa, kutakurwa, kuchengetwa kwezvinhu zvinogadzirwa zvakagadziriswawo zviri pamutemo," nyanzvi inowedzera. “Semuenzaniso, inoda kugadzirwa, kuchengetwa uye kutakurwa zvakasiyana kubva kuzvinhu zvisina-organic. Vagadziri vanofanirwa kusiya kurongedza kunogona kutungamira mukugadzirwa uye kusvibiswa kwezvakatipoteredza, zvinosanganisira polyvinyl chloride. "
Izvo zvakakosha, mumaonero ake, kusimbisa pfungwa yenguva yekushandurwa - ino inguva yakati yenguva apo izvo zvinodikanwa zvakagadzirirwa kugadzirwa kwe organic, asi zvigadzirwa hazvisati zvichizivikanwa se organic. "Kwenzvimbo dzakadyarwa (mu
kusanganisira kurima zvirimwa zvemiriwo) nguva yekushandurwa ingangoita makore maviri kudyara, ”Ksenia Firsova akasimbisa.
Parizvino, matatu matatu masetifiketi emitambo anozivikanwa muRussia. Nzvimbo yavo yekubvumidzwa uye zvepamutemo zvekutaurirana zvinogona kuwanikwa mune rejista yeFederal Accreditation Agency, Firsova manotsi. “Zvinosuruvarisa, tinofanira kutaura pamusoro peizvi zvakasiyana, sezvo nyaya dzakazozivikanwa kuti riinhi
vanobiridzira vakapa mabasa avo vakamiririra munhu anonyanya kuzivikanwa chitupa, zvimwe sebazi rakanga risipo, ”anowedzera. Kana mugadziri weRussia akaronga kuendesa zvigadzirwa zve organic kune imwe nyika, saka haakwanise kuita pasina chitupa chepasi rose, nyanzvi inoyeuchidza.
Ine ziso rekutengesa kunze
Chitupa chepasi rese chinovhura nzira yekuti mabhizinesi apinde mumisika yepasi rose, anoenderera mberi Ksenia Firsova. "Panguva imwecheteyo, ivo vanosarudza kuti ndechipi chitupa chinodiwa, zvichibva pane zvinogona kutengeswa musika, sezvo zviyero zvakasiyana munyika dzakasiyana. MuRussia, chitupa chakapararira pasi rese chiri maererano nemitemo yeEU kana yeUS, anodaro, "kupihwa chitupa kuJapan neChina hakuna kujairika"
Usati watanga kuita kwechitupa, iyo "Organic Nyanzvi" nyanzvi inokukurudzira kuti uzvizive neyakajairwa (ivo vese vane misiyano yavo) uye sarudza chitupa chitupa. "Semuenzaniso, maererano neEuropean organic standard, anenge gumi nemashanu emakambani ekuzivisa kunze kwenyika ane mvumo yekuita maitiro muRussia, ayo asingasviki hafu ari kushanda nesimba," akajekesa.
Sekureva kwaFirsova, maitiro acho haana kusiyana zvakanyanya kubva kuRussia, asi pane matambudziko. Nekudaro, kutaurirana neyekuzivisa uye zvinyorwa zvichave muChirungu. Uye zvakare, kune akati wandei maficha anofambidzana nekutengeswa kwezvinhu zvakasikwa zvigadzirwa, semuenzaniso,
kunyoreswa kwezvinonzi zvitupa zvekutengesa zveboka rimwe nerimwe. "Zvisinei, kana iwe ukakurumidza kunzwisisa zvese zvakaoma zvechitupa, matambudziko asingatarisirwe anogona kudzivirirwa," anovimbisa.
Sekureva kwaSergei Korshunov, huwandu hwezvinhu zvese zvinogadzirwa kubva kuRussia pakupera kwe2019 inofungidzirwa pamamirioni mapfumbamwe euros. Izvi zvinonyanya kutengeswa kunze kwezviyo, nyemba uye mbeu yemafuta, pamwe nezvinomera zvemusango. Iko kugona kukuru kwekutengesa kunze kwemuriwo miriwo, mumaonero ake, manhanga negariki.
Sekureva kwaAmiran Zanilov, parizvino pane chishuwo chakakura chezvinhu zvakagadzirwa pamusika wepasi rose, izvo mapurazi eRussia asingakwanise kuzadzikisa zvizere nekuda kwemavhoriyamu madiki ekugadzira.
Uye zvakare, kubva pakuona kwaOleg Mironenko, hazviite kuti mabhizinesi epamba atengese miriwo nekukunda misika yekunze, nekuti musika wepamba wezvigadzirwa zvisati zvazara munyika. "Kutengesa miriwo muRussia ikozvino kune pundutso sekuigovera kune dzimwe nyika - mutengo wemitengo hausiyane zvakanyanya," nyanzvi inodaro. - Pamusoro pezvo, inofanirwa kutariswa kuti kune nyika dzatove nenzvimbo ine chivimbo mukugoverwa kwemuriwo wevhu. Italy iri panzvimbo yekutanga, ichiteverwa neSpain neUkraine. "
Mukufunga, nyika inofanirwa kufarira kutengeswa kwemiriwo yakagadziriswa ine huwandu hwakawedzerwa. Nekudaro, muRussia hapana zviripo zvirongwa zvekugadzirisa zvakadzama michero nemichero yezvirimwa, anodaro Oleg Mironenko. "Unogona kurima miriwo kana michero, asi wozvishandura kuita muto, makomputi, jamu kana michero yakaomeswa uye panguva imwechete chengetedza chigadzirwa chekupedzisira chakaoma: hapana kana kwekuzviita," nyanzvi yakatsanangura.
Kunyangwe paine matambudziko, kambani "Organic Around" parizvino iri kushanda kunze kwenyika kwezvinhu zvakagadzirwa zvakagadzirwa (kunyanya mafuta emiriwo). Kutanga kutaurirana kuri kuenderera. "Bhizimusi basa kuItari rakarongedzwa neFund yeKudiki Bhizinesi Rutsigiro rweStavropol Territory, zvinosuruvarisa, rakundikana nekuda kwekupararira kwecoronavirus," anodaro Amiran Zanilov.
Zvinorwadza mapoinzi uye marefu-marefu maitiro
Iye zvino pakati pevagadziri, kufarira chitupa kuri kukura zvakatsiga. Ksenia Firsova anobatanidza izvi nekuvandudzwa kwenyaya kwenyaya yekugadzirwa kwehupenyu muRussia: mutemo unoshanda pazvinhu zvinogadzirwa, kuvapo kwezvirongwa zverubatsiro, zvirongwa zvedzidzo, uye kuvaka mukana wekutengesa kunze. Sezvo cheni yese inosimbiswa mukugadzirwa kwe organic, mumaonero ake, kukura kweiyo organic chikamu kunogona kuenderera senge avalanche.
"Kutengesa kunoda kuti makambani asimbise zvikumbiro zvehupenyu," saka vanogadzira michero vanoenda kunotsvaga zvigadzirwa zvakasikwa, "anotsanangura Ksenia Firsova. - Mukuchengetwa kwemhuka, chikafu chemuchadenga chinodiwa, mukukura kwezvirimwa - fetiraiza yembeu nembeu, zvigadzirwa zvemuzvarirwo zvekuchengetedza miti. Segwara, isu tine ruzivo rwepasi rose rweye organic movement, iyo inoratidza kuvandudzwa, kuwanda uye kubudirira kweiyo organic kurima system inogona kuve, nyanzvi nyanzvi inodaro.
Ehe, misika yemakemikari muRussia ichiri kusimukira, uye zvivakwa zvese zvekutsigirwa kwayo hazvina kusimukira, Oleg Mironenko anotarisisa. "Biofertilizers uye zvigadzirwa zvehupenyu zvekurima muriwo, mbeu dzehunhu dzinodiwa," nyanzvi inonyora. "Idzi nzvimbo dziri kungotanga kukura." Kunyangwe paine mipata iyi, musika weRussia organic uri kurwira kukura uye kusimudzira.
Sezvineiwo, kwete zvese zvirimwa zvemiriwo (semuenzaniso, karoti, beet, kabichi) zvinogona kudzivirirwa nezvigadzirwa zvehupenyu. Naizvozvo, nhasi basa riri kushanda riri kuenderera mberi rakanangana nekugadzira mahybrids matsva nemishonga yezvipukanana.
Nyaya inonyanya kunetsa ndeyekuchengetedzwa kwezvirimwa zvemiriwo (semuenzaniso, kabichi) kubva kuzvipukanana zvakaita sechiwondo, thrips uye hove, zvishoma kubva
masora nezvirwere. Saka, kana, pavhareji, imwe yemakemikari kurapwa inoshandiswa kuchengetedza kabichi kubva kuzvirwere uye imwe kana mbiri - kubva kumasora, ipapo huwandu
mishonga yemakemikari kurwisa tupukanana (senge moth uye thrips) inogona kusvika masere kusvika mapfumbamwe.
Sekureva kwenyanzvi dzeindasitiri, kurudziro yekusimudzira musika we organic kunogona kuve kuwanikwa kwemidziyo yezvemari uye zvirongwa zvakasarudzika zvechikwereti zvine chinangwa chekupa mapurazi nemidziyo inodiwa uye tekinoroji Chinhu chakakosha chekubudirira zvakare kuwanikwa kweakasarudzika evashandi uye zvirongwa zvekuvandudza vashandi.
Amiran Zanilov anosimbisa: kuti uwedzere kukura mukukura kwemuriwo wekurima, matekinoroji anodikanwa kuti uwane mutengo wezvinhu zvakasvibirira zvishoma kupfuura mukugadzirwa kwechinyakare. Kunyanya, isu tiri kutaura nezve kuunzwa kwehunyanzvi-yekuchengetedza matekinoroji mukugadzirwa kwe organic, pamwe nekuvandudzwa kwesystem yekuchengetedza zvirimwa zvemiriwo kubva kumasora, tupukanana nezvirwere. Uyezve,
Izvo zvakakosha kuti ushingaire kufukidza musoro wezvinhu zvakasikwa pamwe nekubatanidzwa kwehunyanzvi kubva mumunda webiology nemushonga. "Asi shanduko yakakosha, iyo yandinotarisira ndeyangu, kuiswa kwezvinhu zvinogadzirwa muzvinhu zvinovaka muviri zvevachiri kuenda kukireshi nevadzidzi vepuraimari," akadaro mukuru weOrganic Around. "Uku ndiko kuchave kudyara kukuru mukugona kwevanhu munyika."
Mumakore anotevera, sekuvimbisa kwaSergei Korshunov, kukura kwemusika wekurima wekurima weRussia unotarisirwa, kunyanya muchikamu chemiriwo. “Miriwo mitsva yemwaka ndeye chivimbo chehutano uye hutachiona hwakasimba, vanhu vave kutarisisa zvakanyanya zvigadzirwa zvinobatsira nekusimbisa muviri. Saka organic miriwo inguva refu! " - nyanzvi inovimbisa.
“Munogona kutaura zvakawanda pamusoro pematambudziko, munogona kunyora chidzidzo chikuru nezvazvo, asi vatengi nhasi vanotoda miriwo inowanwa. Uye mumamiriro ezvinhu akaoma, vagadziri vedu vari kuyedza kuzvikurisa. Isu tinongoda kutsigira mabhizimusi epamba panyaya iyi yakaoma, ”anodaro Oleg Mironenko.
Source: "Raik Zwaan uye Technology", No. 4, 2020
Tags: organic miriwo inokuramusika we organic
Ukraine ichaisa rekodhi renhoroondo yekutengesa kunze kwembatatashi mumwaka we2020 / 21
11 mabhiriyoni emaRubles anozopihwa mukuvandudza matekinoroji emajini